Ngaphambi ukhetha imodeli eyisisekelo yokukhulumisana, kubalulekile ukuqonda ukuthi, eqinisweni, yilokho zokuxhumana. Kukhona izincazelo eziningana kule nqubo, ngalinye elikwazi e ngandlela-thile ephawula ke. Esikhathini Imibandela kakhulu, zokuxhumana libizwa exchange kolwazi phakathi kwabantu (hhayi kuphela) usebenzisa izimpawu ezivamile futhi eqondakalayo kanye nezimpawu. G.Gerbner kuchazwa njengendlela inqubo yezenhlalakahle nokuxhumana ngemiyalezo, A.P.Panfilova zokuxhumana inqubo ebizwa ngokuthi i-exchange ekhethekile yolwazi, ngokuhamba yimaphi amalungu ayo idluliselwe okuqukethwe kuye ngokomzwelo nokuhlakanipha. definition ezahlukene I.A.Richards ezihlongozwayo ukushaya zokuxhumana ngumkhuba lapho uvalo izenzo umuntu engqondweni omunye, ukuze kuphakamisa i umuzwa ofanayo siqu sakhe.
Ukuxhumana njengoba ukuxhumana liyadingeka Kusekelwe schema ethize noma imodeli. Eqokomisa onobuhle yokuxhumana, kubalulekile, okokuqala kunakho konke, ukuphathwa isibe imodeli ebhukwinitifundvo «5W» umcwaningi American G.Lassuella. It siqukethe izingxenye ezinhlanu:
1) umthombo kolwazi (othi);
2) okuqukethwe ulwazi (ethi);
3) indlela ulwazi exchange (ulimi, amakhodi, neziteshi);
4) Ulwazi Umsebenzisi umamukeli (kuso ngocansi);
5) Umphumela wokugcina zokuxhumana (umphumela wokugcina ngokwaziswa esikuthola).
Okunjalo onobuhle zokuxhumana abizwa ngokuthi komugqa libhekene eyodwa pointedness, umthelela ngqo ku umamukeli, okubonakala lapha kuphela njengoba umthombo wokwaziswa nganoma iyiphi indlela osabela ngayo kukho. Ngokuvamile onobuhle ezifana baye bagxekwa yokuthi baqondiselwa ohlangothini olulodwa, futhi acabangele isakhi esibaluleke kakhulu - umgomo oyinhloko we inqubo angadingeki ukuhlaziya ekulenzeni libe namandla. Ukuthuthukiswa zokuxhumana imodeli yasikisela Dzh.Gerbner, U.Shramm, R.O.Yakobson, K.Shennon kanye nabanye abacwaningi.
Imele kanti eyesibili indlela yokuxhumana iqembu. Kuhlanganisa imodeli non-eqondile yokuxhumana: interactive, ensimini, interactive, njll Ezivelele usosayensi Russian futhi philologist Bakhtin ukusikisela umqondo umfuziselo dialogic yokuxhumana, ogxile ezimbili futhi okudingekayo ukuze uqonde inqubo lokhu postulate.
Okokuqala, Bakhtin waveza ukuthi ingxenye ebaluleke kakhulu futhi okuphawulekayo yimuphi kusho kuyinto okuqondiswe yayo, impatho saziso kuwo wonke umuntu, okungukuthi, khona isilaleli, ngaphandle okuyinto ngeke kwabakhona isikhulumi.
Okwesibili, noma isiphi isitatimende benawo umuzwa kuphela esimeni ezithile ngesikhathi esithile nasendaweni ethile. Ngamanye amazwi, igama ikhodi njengophawu ngokwalo akusho lutho futhi kwenza kuphela umuzwa embhalweni, umuntu ufunda, ngokufunda omusha ngamunye kwakha nencazelo entsha yegama elithi. Ngasinye esisha ufunde noma ulalele ukudala umbhalo wakho.
Non-eqondile onobuhle interactive yokuxhumana ngemibuzo le "ukuthumela idatha" elithi uqobo. umcwaningi laseChile U.Maturana ukholelwa ukuthi leli gama libhekisela kuphela eyaphakama Yiqiniso yokuxhumana ngokuhlanganyela ucishe ukuqonda ezifanayo into lesithathu, ngaphandle kwalokho, akusiyo lokho obukucabanga, ngamunye abahlanganyeli kule nqubo.
Gestalt abelaphi lapho sisebenzelana isiguli futhi ukuqonda indaba yakhe kukhona umqondo ensimini. Kuyinto isizinda ezithile ukuthi uyazifihla umbuzo isiguli zibheke owelapha, nobudlelwane phakathi nomunye njengoba amalungu ekuxhumaneni zokuxhumana, kanye okuhlobene inkulumo esashiwo ngokombono we siqu empilweni ngayinye. Lokhu yangemuva engavumelekile itholakala ejwayelekile, hlangothi. Kuyasiza ukuba awagweme amaphutha in the ukuxhumana kanye sifinyelele elamukelekile kumsebenzi zokwelapha, naphezu abahlanganyeli ezahlukene isipiliyoni subjective of kuchumana emkhatsini webantfu.
Model zokuxhumana nowonk 'uwonke nawo ihlukaniswe komugqa labhaliwe. Umehluko kuyagcinwa e nemingcele eziyisisekelo yenqubo zokuxhumana. Ngakho, uma imithombo ekuchumana kukhona umndeni, omakhelwane nabangane kwabezindaba - a tikhungo tetenhlalo lonke. ekuchumana ubuso nobuso, futhi mass - nge iziteshi ezahlukene kwezobuchwepheshe, lapho at amabanga akude. Ekugcineni, ngo-ekuchumana kungabonakala nasemkhakheni zokuxhumana ngqo okuqondile phakathi ababambiqhaza, futhi ubone impendulo bukhoma kuso, futhi ubuhlobo obunjalo akuyona ngqo, ngokungaqondile, noma imisiwe ngesikhathi zokuxhumana nowonk 'uwonke.
Isayensi yemvelo - kuba ... Uhlobo ulwazi lwesayensi mayelana nemvelo
Salt. ammonium Bicarbonate
Formula cellulose. izakhiwo Chemical ngokomzimba. Ukulungiselela, isicelo
Kwabantu enokwehla eRussia
Isadora (violet): izici zokunakekelwa
Komphakathi ngempumelelo izingane zasenkulisa ngenxa nokuxhumana umndeni nekubhala kanye zasenkulisa izikhungo
I-Fiat 500X: izincazelo
Dzhin Simmons, umculi we edume band Kiss
Ngokulandelana zenqubo inqubo civil: isisekelo futhi abaphikisa esikhundleni ummangalelwa singenele
Le filimu "zilwane ezinhle": nabalingisi
Hjurrem umhlobiso kanye namanye amaqhawe yochungechunge "Ezinhle Century"
Inkjet ngephrinta CISS: Izibuyekezo ikhasimende
Rosario Dawson: Biography futhi Filmography
Vaz-21045: Ukucaciswa, izithombe